Sababaha Ku Kalifa Dumarka Is Cadeynta - Daryeel Magazine
Sababaha Ku Kalifa Dumarka Is Cadeynta
‘Doqon iyo habeen ba madow’ had iyo goor halheyskaas ayaan ka maqli jiray markan arko gabar Somali ah oo difaceysa ama ka doodeysa sababtay isku cadeysay. Gabdhaha qoyskeyga waxa u badan midibka maariinka (Brown) ah anagoo ka marneyn midibka madow, si kastoo ahaataba labada midaba kuwo is cadeeyay ayaa ku jiraan.
Waligey waxan aha qof ku qanacsan midibka iyo muuqa Allah (SWT) i siiyay, marnaba maku fakaro inaan taas qof ra’yigisa ku badalo. Dadka qaasatan wiilasha sidey ii arkaan qof ay wax ka badalan ma aan ahi oo kuligeen qaab, midab iyo muuq gooni ah ayuu leeyahay mana ahan in qof kaste oo ku arka aad qancisid dhaayihisa. Markaan in badan ku dhex mareysanayay ayaan ogaaday inaan kalsooni aan nafteyda ku qabo ay iga celisay soo gadashada kareemka Faiza.
Daryeelka Bishimaha Iyo Cadeynta Ilkaha Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Bunka Iyo Qurxinta Wajiga Dumarka Sababaha Keena Cirrada Timaha